အန်းဒီးကွန်းဒေါလင်းတ - ဝီကီပီးဒီးယား
အန်းဒီးကွန်းဒေါလင်းတ၏ သိပ္ပံအမည်မှာ ဗွယ်တျာ ဂရေးဖက်စ် ဖြစ်သည်။ တောင်အမေရိကတိုက်တွင် တွေ့ရသည့် လင်းတငှက်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ တောင်အမေရိကတိုက်အနောက်ပိုင်းရှိ အန်းဒီးတောင်တန်းနှင့် ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတလျှောက်တွင် တွေ့ရသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်နှင့် တောင်ပံတဖြန့်အကွာအဝေးကို ပေါင်းသော် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရွယ်အစားအကြီးမားဆုံး ပျံသန်းနိုင်သည့် ငှက်လည်း ဖြစ်သည်။
အန်းဒီးကွန်းဒေါလင်းတကို တောင်အမေရိကတိုက်၊ ပီရူးနိုင်ငံနှင့် ချီလီနိုင်ငံတို့ရှိ အန်းဒီးတောင်တန်း၏ ပေ ၁ဝ⁠ဝဝ ကျော်တွင် နေလေ့ရှိသည်။ ယင်း၏အတောင်ပံကို ဖြန့်ထုတ်လိုက်လျှင် တစ်ဖက်အစွန်းမှ တခြားတစ်ဖက်အစွန်းအထိ ၁၁ ပေခန့် ရှိ၏။ ဤလင်းတကြီးသည် အခြားလင်းတတို့ကဲ့သို့ပင် မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာ ကောင်းသော်လည်း ကောင်းကင်တွင် လေဟုန်စီး၍ ပျံနေသော အခါမျိုး၌မူ ကြည့်ရခန့်ညားပေသည်။
အန်းဒီးကွန်းဒေါလင်းတသည် အလွန်မြင့်မြင့် ပျံတက်၍ တိရစ္ဆာန် အသေကောင်ကို စူးစမ်းရှာဖွေတတ်သည်။ မျက်စိအလွန် စူးရှသောကြောင့် ဤမျှမြင့်သောအရပ်မှ အောက်မြေပြင်ကို မြင်နိုင် ခြင်း ဖြစ်သည်။ သားကောင်ကို တွေ့မြင်လျှင် လင်းတကြီးသည် တစ်ဟုန်တည်းအောက်သို့ ထိုးဆင်းလာတတ်သည်။ ကြီး သော စွမ်းအားကို အသုံးပြု၍ သားကောင်ကို တင်းအဓမ္မ ထိုးသုတ်ယူတတ်ကြသောကြောင့် ဆိတ်အုပ်သိုးအုပ်ရှင်တို့သည် အမြဲသတိထားနေကြရသည်။
အန်းဒီးကွန်းဒေါလင်းတသည် ကိုယ်ထည်ကြီးမားသည်နှင့်အမျှ အစားအသောက်လည်း လောဘတကြီး ငမ်းငမ်းတက် စား တတ်၏။ အစာစားပြီးသောအခါ လေးလံထိုင်းမှိုင်း၍ နေတတ်လေရာ ဤအချိန်မျိုးတွင် ငှက်ကြီး ကို အလွယ်တကူ ဖမ်းယူ ရရှိနိုင်သည်။
အန်းဒီးကွန်းဒေါလင်းတ၏ အမွေးအတောင်သည် အများအားဖြင့် နက်သည်။ အတောင်ပံတွင် အဖြူကြောင်းများ ပါရှိတတ် သည်။ အရေသည် အရောင်အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲ၏။ လည်ပင်းနှင့် ဦးခေါင်းတို့သည် အမွေးအမှင်မရှိဘဲ ပြောင်နေကြသည်။ လည်ပင်းအမွေးစပေါက်သော နေရာ၌ အရစ်ထနေ၏။ အန်းဒီးလင်းတဖို၏ ဦးခေါင်းတွင် အမောက်သဖွယ် အတွန့်အလိပ်ရှိသည်။ အန်းဒီးကွန်းဒေါလင်းတသည် ဥသည့်အခါ နှစ်လုံးသာ ဥတတ်သည်။ ရက်သတ္တ (၇)ပတ်မျှ ကြာသောအခါ သားကောင် ပေါက်၏။ အန်းဒီးကွန်းဒေါလင်းတငယ်သည် နှေးကွေးစွာ ကြီးပြင်းသည်။ တစ်ခါလည်သားကျမှ ပျံနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် မိမိအစွမ်းဖြင့် အစာရှာမထွက်သေးဘဲ တစ်နှစ်⁠နှစ်နှစ်ကြာအောင် လင်းတကြီးတို့နှင့်အတူ နေပြီးမှ ခွဲခွာရှာဖွေတတ်သည်။
↑ BirdLife International (2020). "Vultur gryphus". IUCN Red List of Threatened Species 2020. IUCN.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အန်းဒီးကွန်းဒေါလင်းတ&oldid=709617" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။